घरनजिकै स्वास्थ्य जाँच्न पाएपछी मदनपोखराका वृद्धवृद्धाले गरे जनप्रतिनिधी भएको महसुस – Community Radio Udayapur 102.4MHz
घरनजिकै स्वास्थ्य जाँच्न पाएपछी मदनपोखराका वृद्धवृद्धाले गरे जनप्रतिनिधी भएको महसुस
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार ०७:२७ March 4, 2019 radioudayapur	0 Comments
बोली । माघ २३ – घरनजिकैको वडा कार्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफै आएर वृद्ध शरिरको चेकजाँच गरिदिँदा तानसेन नगरपालिका वडा नं. ८ मदनपोखराका गोपिनाथ खनाल खुसी हुनुभयो ।
तानसेन नगरपालिकाको घरघरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तरगत स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले वडा नं. ८ को कार्यालयमा राखेको शिविरमा ८६ बर्षिय खनाल जस्तै ७२ जना वृद्धवृद्धाहरुले चेकजाँच गराउनुभएको छ । खनालले वृद्ध भएपछी अस्पताल जान गाह्रो हुने भएकाले घरनजिकै शिविर राखिदिँदा नगरपालिका वृद्धहरुको स्वास्थ्यमा जिम्मेवार भएको महसुस गरेको बताउनुभयो ।
खनालले कान कम सुन्ने र दमको समस्या भएको बताउँदै त्यसको निशुल्क औषधी समेत दिँदा खुसी लागेको बताउँदै गाउँमा जनप्रतिनिधी भएको अनुभुती गरेको बताउनुभयो । वडा नं. ८ को कार्यालयमा भएको शिविरमा ६० देखी सय बर्ष सम्मका वृद्धवृद्धाहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गरेका छन् । स्वास्थ्य परिक्षणमा सहभागी ७२ जना मध्ये ४४ जनालाई सुगरको समस्या रहेको सहभागी सोमनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
मदनपोखरा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख झविन्द्र न्यौपानेले नियमित औषधी खानेहरुलाई एक महिनाको औषधी वितरण गरेको बताउनुभयो । न्यौपानेले अधिकांश वृद्धवृद्धाहरुलाई सुगरको समस्या देखिएको भन्दै सुगर हुँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी बारे आवश्यक सल्लाह र सुझाव समेत दिएको बताउनुभयो ।
तानसेन नगरपालिकाले ६० बर्ष माथीका वृद्धहरुलाई विभिन्न स्थानमा शिविर राखेर सेवा दिईरहेको छ ।
← चर्चित चित्रकारले जस्तो दमकडाका कुशलले बनाए धार्मिक सहिष्णुता सम्बन्धी चित्र
बगनासकालीमा औपचारिक कार्यक्रम गरेरै ढिकी जाँतो स्थापना →